तेक्वान्दो खेलाडी विष्टसहित राखेप सदस्य सचिवमा १८ जनाको आवेदन
नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिव पदका लागि कीर्तिमानी तेक्वान्दो खेलाडी दीपक विष्टसहित १८ जनाको आवेदन परेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सदस्य सचिव पदको लागि एक साताअघि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । दर्खास्त दिने अन्तिमदिन शुक्रबारसम्म १८ जनाको आवेदन परेको हो । खेलकुदलाई सही ढंगले अगाडी बढाउन सक्छु भन्ने हेतुले आफुले आवेदन दिएको दीपक बिष्टले बताए ।
‘एउटा खेलाडीको रुपमा मैले खेलकुदको बास्तविकता धेरै बुझेको छु । खेलकुदमा ३० वर्ष खेलाडी र प्रशिक्षक भएर बिताए । मलाई व्यवस्थापकको रुपमा खेलकुदमा अझै राम्रो र प्रभावकारी काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ । खेलकुद नै मेरो जीवन हो । खेलकुदमै अझै केही गर्न मन छ,’ विष्टले भने ।
विष्ट नेपाललाई दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा लगातार चार स्वर्ण दिलाउने कीर्तिमानी खेलाडी हुन् । उनी ओलम्पिकमा छनोट यात्रा तय गरेर सहभागी हुने नेपालका दोस्रो तेक्वान्दो खेलाडी पनि हुनुहुन्छ । छनोट चरण पारगर्दै ओलम्पिकमा सहभागी पहिलो खेलाडी भने तेक्वान्दोकी संगीना वैद्य हुन् ।
तेक्वान्दो खेलाडी विष्टसँगै सदस्य सचिव पदका लागि आवेदन दिनेहरुमा डा. अच्युत लामिछाने, आरके विष्ट, रविराज कर्णिकार, ममता श्रेष्ठ, मानबहादुर गुरुङ, सुदिल शाही, टंकलाल घिसिङ, विनोदकुमार यादव, भरत महर्जन, देवराज चौलागाई, राजकुमार कार्की, दिलकुमारी नेपाल, जगतमान श्रेष्ठ, सिद्धार्थ लामा, भरत चालिसे, छुम्बी लामा र सुनिल नकर्मी छन् ।
सरकार परिवर्तनसँगै रमेशकुमार सिलवाल सदस्य सचिवको पदबाट बर्खास्त भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिनेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा गठित छनोट समितिले आइतबार आफ्नो भावी कार्ययोजना र कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि मन्त्रालय बोलाएको आवेदक मध्येका डा. अच्युत लामिछाने बताए ।